IZIZATHU EZI-6 ZOKUBA ABASETYHINI BAZIVA IINTLUNGU NGAKUMBI KUNAMADODA | UTHINTELO - UKUNCEDA IINTLUNGU
Izizathu ezi-6 zokuba Ube Buhlungu
Eyona / Ukunceda Iintlungu
Nalu uhlobo lwendala oludala: Amadoda anzima kwaye isini esifanelekileyo, kulungile, kuncinci. Kuvakala ngathi kuphelelwe lixesha kwaye mhlawumbi nokuba ungowesini- kodwa isayensi entsha ithi kusenokwenzeka ukuba kukho inyani kwimbono yokuba abasetyhini bafumana iintlungu ngakumbi kunamadoda.
Ngapha koko, abafazi baxela Iipesenti ezingama-20 ngaphezulu amanqanaba entlungu kunamadoda ngenxa yeemeko ezifanayo, ngokutsho kwesifundo esitsha kwi Ijenali yeNtlungu . Abaphandi bahlalutya iirekhodi zonyango zezigulana ezingaphezu kwe-11,000, ezilinganise amanqaku abo entlungu kwisikali se-0-10 (apho zero yayingenantlungu, kwaye i-10 yayiyeyona nto imbi onokuyicinga). Iziphumo? Kuzo zonke iimeko-nokuba ngaba izigulana zivavanyelwe i-hernias, i-sinus aches okanye isifo samathambo, ukukhankanya nje ezimbalwa-abasetyhini baxela ukuba baziva iintlungu eziqaqambe ngakumbi kunamadoda.
Kodwa ngaba oku kuthetha ukuba ababhinqileyo ngokwenene bafumana iintlungu, okanye ukuba sikulungele ukukhalaza? 'Akunjalo kuba abafazi banama-wimps, utsho ingcali yeentlungu uJacob Teitelbaum, MD, umbhali Intlungu yasimahla 1-2-3 , kodwa ngenxa yokuba banentambo ngokwahlukileyo. '
Apha, izizathu ezithandathu ezimangalisayo zabasetyhini baziva iintlungu ngakumbi kunamadoda:
1. Zifakwe iintambo ngokoqobo ngokwahlukileyo. Imicu ye-neural (ebizwa ngokuba yi- Iqumrhu callosum ) ezibaleka phakathi kwenxalenye yengqondo elawula imvakalelo kunye nenxalenye etolikayo inkulu kakhulu kubafazi. Lo mahluko kubume kusenokwenzeka ukuba kutheni amadoda etyekele ekucingeni izinto (nangaphandle kokuqonda) ngaphambi kokuva iintlungu, ngelixa iingqondo zabasetyhini zijolise ekufumaneni iintlungu ngokukhawuleza, utshilo uTeitelbaum. Ngapha koko, ukuskena kwengqondo kubonisa ukuba amacala obuchopho aphikisayo ayakhanya xa abasetyhini befumana iintlungu xa kuthelekiswa namadoda.
2. Abasetyhini baneempawu ezimbalwa zokuthintela iintlungu. Kuthatha i-morphine ephindwe kabini ukunqanda iintlungu kubantu ababhinqileyo njengoko isenza kumadoda, ngokwezifundo. Ngoba? Abasetyhini abanazo ezininzi Kwiopioid Ii-receptors, ezisebenza njengeziphelo zokungenisa ii-endorphins zokuziva ulungile ukunciphisa iintlungu.
3. IiHormone zenza umahluko. 'I-Testosterone inefuthe kwintlungu, kwaye amanqanaba aphezulu athetha iintlungu ezimbalwa, utshilo uGqirha Teitelbaum. Abasetyhini banamanqanaba asezantsi e-testosterone, oko kuthetha ukuba i-ache ethambileyo kwindoda inokuziva inzima ngakumbi emfazini.
4. Isimo sengqondo sinempembelelo. Iingcinga ezizezesini zinokubangela ukuba amadoda axele iintlungu zawo. 'Amadoda kulindeleke ukuba abenzima ngelixa abasetyhini befundiswa ukuveza iimvakalelo zabo, utshilo uGqirha Teitelbaum.
5. Kukho imikhondo kwi-blues. Intlungu eyandisiweyo ifaniswa nokudakumba noxinzelelo kuba ijika ujonge ngaphakathi, utshilo uGqirha Teitelbaum. Kodwa ukujonga ngaphakathi kwiimvakalelo zakho ezingathandekiyo kukwathetha ukuba banokwandiswa. Kuba abasetyhini ubuncinci baphindwe kabini ukuba babe nexhala, kwaye banama-70% amathuba okuba babe noxinzelelo kunamadoda, banokubona iintlungu zabo, nazo.
6. Abafazi bayangena ngakumbi. 'Abasetyhini bangcono ekuzijongeni, utshilo uGqirha Teitelbaum, ke ngoko banokwazi ngakumbi ukuqonda iimpawu zemizimba yabo ngokubanzi.' Ngamanye amagama, kunokwenzeka ukuba banike ingqalelo iintlungu kunye neentlungu zabo-zibenza ukuba babe nakho ukunika ingxelo yokuziva baziva kwasekuqaleni.
Okungakumbi kuthintelo: Iintlungu ezi-5 zokuphelisa iintlungu
ingaba ikhonkco liluma njani
umyalezo weengelosi 333
iipropati ze-ametrine ze-metaphysical
ubunzima boqeqesho lwabasetyhini ngaphezulu kwama-50